Tuesday November 13, 2018 - 12:30:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tan iyo Markii uu Max'med Cabdullaahi Farmaajo uu majaraha uqabtay hoggaanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayuu maamul goboleedyada ugasii dhowaanayay dowladda Itoobiya oo ah dhistay maamullada ku dhisan hanaanka qeybi oo xukun.
Maamulkii Addis Ababa ee qowmiyadda Tigreega hormuudka ka aheyd ayaa maamul goboleedyada dabadhilifyada ah ee kajira dalka Soomaaliya si toos ah umaamuli jiray waxayna Itoobiya aheyd meesha kaliya ee maamulladaas awaamirta lagasoo siiyo.
Farmaajo ayaa dabacsanaanta uu umuujinayo dowladda Xabashida Itoobiya waxay usuurta gelisay in madaxda maamul goboleedyada uu ka gooyay magaalada Addis Ababa.
Maamullada Jubbaland,Koonfur galbeed iyo Somaliland ayaa dareemayay in dowladda Federaalka ay ka xigsatay dhanka Itoobiya, isbedelka siyaasadeed ee Itoobiya kajira ayaana arrinkaas loo sababeeyay.
Faysal Cali Waraabe oo kamid ah siyaasiyiinta maamulka isku magacaabay 'Somaliland' ayaa khudbad uu jeediyay wuxuu uga hadlayay gaabiska ku yimid xiriirkii maamulkiisa kala dhaxeeyay Itoobiya.
Farmaajo oo uu ku sifeeyay canug yar ayuu ku eedeeyay in Itoobiya uu ku diray maamulka Somaliland "Waa taas Maanta Inanka yaree Farmaajo ah oo isaga oo 15 jir ah Mareykanka tegay Maanta Itoobiya ayuu inaga xiray,anaga ayaa ugu wacan oo isku jeedna,” ayuu yiri Feysal Cali waraabe.
Falanqeeyayaasha Siyaasadda ayaa rumeysan in halkii Itoobiyaanku daadihin jireen madaxda maamul goboleedyada ay gardaadinayaan kuna adeeganayaan Farmaajo oo tanaasul dhan walba ah u sameeyay Xabashida sida isagoo usaxiixay in ay la wareegaan afar dekadood oo kuyaal Soomaaliya islamarkaana ay diyaariyaan qorshe lagu mideynayo Itoobiya iyo Soomaaliya.
Halkan ka degso Khudbadda Faysal Cali Waraabe ama Hoos ka daawo